9 -Feb 2017
Sizwile izinto eziningi mayelana nomkhiqizo weMicrosoft Dynamics AX owawukulindeleke okuyi-AX7. Ngenkathi i-AX7 isalokhu ifaka i-punch ye-adaptation yayo yangaphambili, kunezinto ezintsha ezithakazelisayo mayelana nokuthuthukiswa kwe-AX7 okumelwe ukwazi.
Okwamanje ku-AX7 asinayo indawo yokusebenzela ye-MorphX / AX. Kunalokho, ukuthuthukiswa kwe-AX iMicrosoft manje isinike i-Visual Studio.
I-AX7 incike emibhalweni embalwa, enjengeyansi:
Ingxenye: I-Element yinoma yikuphi ukuhlala okuhlala ku-AOT. I-Base Base Enumeration, i-EDT, Ithebula nokunye okunye.
Bonisa: Isibonelo siqoqo lwezingxenye, esinezinhlobo ezihlukile ngaphambili.
Izibopho: Isisindo iyunithi echithwayo, okungenzeka ibe namaModeli ahlukahlukene.
Nweba: Imiklamo yinkampani engaguquki yento yonke elindelekile ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza.
Ngokungena kwe-AX7, manje singenza ukuthuthukiswa ku-AX ngokusebenzisa amasu amabili:
Ukweqa kubonisa ukuthi kwenzeka ukuthi ushintshe noma yikuphi ingxenye engxenyeni engenhla, kuyobe iphakamisa incazelo yayo, kungezansi. Lokhu yilokho esikwenzayo kuze kube ngu-AX2012 ukushintsha i-AX. Ivumela ngokuyisisekelo imethadatha kanye nekhodi yomthombo kusendlalelo esiphezulu.
Kusho umqondo wokwandisa izingxenye ezikhona, ngaphandle kokuchitha labo abakhona ngezendatshana ezahlukene. Lokho kusho, izingxenye ngeke ziguqulwe, kunalokho izingxenye zizokhuliswa. Ngokwenza izingxenye zokunweba, iningi lezintandokazi kanye nekhodi zilahlwa ngendlela ehlukile ukuhlangana ndawonye. Iqukethe ikhodi eyayihlanganisiwe noma ishintshwe kwirekhodi lokunyuswa.
Ngaphambi kokusebenza ku-Visual Studio kufanele senze izilungiselelo ezimbalwa ezizokwenza ukubandakanyeka kwentuthuko ne-AX kancane kancane.
Isinyathelo 1: - Yiya ku-AX 7 Izinketho
Isinyathelo 2: - Setha Izinyathelo Izinketho
Isinyathelo 3: - Setha Izinketho Zomhleli Wezithombe
Isinyathelo 4: - Beka Izinketho Ezinhle Zokuzikhandla
Themba lokhu kwenza isipiliyoni sakho sokuthuthukiswa kwe-MS AX7 sigcwaliseke kakhulu. Ukuthatha ezisekelo zezokuthuthukiswa kwe-Microsoft Dynamics AX7 kusuka ku-Koenig kuzokukujwayela ngemiphumela eminingi eningi engaba khona kanye nomkhathi omusha omkhulu wamathuba ongazange ucabange ukuthi ukhona.
Indlela Yokugcina Imisebenzi Ngesikhathi